22.11.2017, Gaalkacyo oo la dhagax dhigay Dhismo ay yeelan dooto Dowladda hoose
Wednesday, 22 November 2017 18:29
Miisaaniyadda Puntland ee
Sunday, 19 November 2017 17:14
Farmaajo oo u safray Dalka Imiraatka Carabta
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa maanta u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta, halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi.
Xigasho TVga Qaranka Somalia SNTV
Saturday, 12 March 2016 20:18
Friday, 02 August 2013 19:31
Wadanka Maraykanka ayaaa waxaa ay sheegeen inay Safaaradaha iyo Qunsiliyada ay ku leeyihiin Dhawr Wadan oo kamida wadamada Islaamkay ay Axada soo socota xiri doonaan.
Kuwa ay yihiin Wadamadaa ayeysan shaacin, waxaa oo kalyia ay sheegeen inay saas u samaynayaan arin la xiriirta faajignaan dhanka Amniga ah.
Wednesday, 03 July 2013 22:48
Warar deg deg ah oo hadda soo dhacay ayaa waxaa la shegay in Militariga Masar ay Inqilaab sameeyeen Madaxweynihii Masarna ay Xilkii ka qaadeen.
Generalka ugu sareeya Ciidamda Masar ayaa qudbad uu ka jeediyey Telefishinka Dalkaa waxaa uu ku sheegay, in Madaxweynaha Masar Xilikii laga qaaday si kumeel gaar ahna loogu dhiibey Qaaliga Maxkamadda Dastuurka ee waddankaa.
Wuxuu kaloo sheegay in Dastuurka ilaa ugu badnaan muso sanad ah meesha laga saaray sida ugu dhaqsaha badan oo dhici kartana ay Doorasho cusub ku dhacayso.
Genralka ayaa markuu Qudbada jeedinayey waxaa la joogey wax garad iyo wadado ka kalakooban dhamaan qaybaha Bulshada Masar. Madaxweyni Mursi ee Xilka laga afgambiyey ayaa wuxuu ku yiri taageerayaashiisa baa layiri, inay Guryahooda isaga laabtaan wax rabsho iyo dagaal ahna aysan samayn.
Wednesday, 03 July 2013 20:35
Diyaarad uu lahaa Madaxweynaha Waddanka Bolivia, Evo Morales ayaa markii ay Hawada Waddanka Austria dulmarey, waxaa lagu qasbay inay magaalda Caasimada ee Vienna ku degto.
Waxaa sabab looga dhigay baa layiri, markii ay Wadamada Faransiiska, Talyaaniga, Isbayn iyo Boortaqiiska ay diideen inay Hawadooda isticmaasho Diyaaradda Madaxweynaha Bolivia.
Laakiin waxaa loo malaynayaa baa layiri inay sabata ahayd, markii lagu tuhmey in Nin Jaajuus ahaa oo Sirdoonka Maraykanka ka fakaday uu Magaalda Muusko ee Ruushka kasoo qaaday si uu waddanka Bolivia Magangelyo Qaxooti uga helo. Been ayuuse noqday malahaa oo Diyaaradda ma uusan saarnayn Jaajuskii ee weli Ruushka ayuu ku suagan yahay.